शासन र प्रशासन, दुवैतिर भैंसी संस्कार – EKalopati
२३ मंसिर २०७५, आईतवार १६:३१
राजन कार्की – अमेरिकामा अस्लिल साहित्यको वार्षिक कारोवार ४ हजार करोड डलरभन्दा बढी हुनेगर्छ । नेपालमा सेटिङ भ्रष्टाचार ४० अर्व बराबरको हुने गरेको छ । ५४ अर्वको गाडी र अवकाशपछि विशिष्टहरुलाई गरीव जनताले तिरेको करले पाल्नुपर्ने अवस्था छ । राजस्व खर्चिने कहाँ, कसका लागि ? यो देशमा समृद्धि र सुशासन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीजस्ता लोकप्रिय नारा लगाउँदै केपी ओली सरकार शासनमा छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिज्ञहरुसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको आशनमा छ । ९ महिने यो शासन दुई पाइलट पार्टी संस्कृति, ३ गेयर गति संस्कार बोकेर आएको छ । तर यो सरकारको गति कछुवाको भन्दा सुस्त छ । चुस्त हुनुपर्ने शासन सुस्तमात्र छैन, चरीत्र सुध्रिन नसकेको शासक र प्रशासकका कारण यो सरकार विधिबिहीन, अपराधमुखी र भ्रष्टाचारको फोहर पोखरीमा आहाल बस्ने भैंसी संस्कृतिको विकास गरिरहेको छ ।
गरे के हुँदैन ? सानाे मुलुक क्युबाकाे सन्देश